प्रमाणित स्केम मास्टर ट्रेनिंग - आईटीएस टेक स्कूल
प्रमाणित स्केम मास्टर ट्रेनिंग
पीएसएम, पीएसपीओ को लागि 2-2 दिन कार्यशाला। सीमित सिट !!!
Scrum स्वीकृत Courseware
प्रमाणपत्र प्रदान गरियो
पाठ्यक्रमको बारेमा कुन विशेष?
स्क्रम एक ढाँचा हो जसको भित्र मान्छे जटिल अनुकूली समस्याहरु लाई सम्बोधित गर्न सक्छन्, जबकि उत्पादक र क्रिएटिव को उच्चतम संभव मूल्य को उत्पादनहरु लाई वितरित गर्दछ।
व्यावसायिक स्केम प्रमाणपत्र (नियोक्ताहरुलाई प्रदर्शन र कोर र एडवांस्क्रिप्शन स्फ्रम ज्ञान को प्राप्त गर्न को लागी सहकर्मी को लागी। कुनै पनि स्केम प्रमाणीकरण को लागी खोज को पनि आफ्नो प्रशिक्षण पूरा गर्न सक्छ)
इंटरैक्टिव सत्रहरूले विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरू (अन्तरक्रियात्मक कक्षा सत्र जसले सिकाउने अनुभव बढाउँछ, आईटीएस स्वीकृत प्रमाणित स्केम प्रशिक्षकहरू द्वारा आयोजित प्रशिक्षण - स्केrumमा उत्कृष्ट दिमाग!)
क्यारियर ग्रोथ (आफ्नो क्यारियरको अवसर विस्तार गर्नुहोस् आफै अगाडि बजारमा सबै उद्योग क्षेत्रहरूमा स्केम प्रथाहरू अपनाउने। विस्तारित टीमका सदस्यहरू जस्तै विकासकर्ता र उत्पाद मालिकहरू PSM र PSPO को बारेमा जान्न सक्छन्)
Scrum को नियमहरु लाई बुझें
Scrum Masters for Scrum Teams and stakeholders
स्क्र्रम चलिरहेको प्रभावकारिता बढाउनुहोस्
सफ्टवेयर उत्पादन र प्रणालीको मूल्य अधिकतम
एघिल परियोजना व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू बुझ्न
स्वामित्वको कुल लागत घटाउँदै
भूमिका खाता क्षमताको माध्यमबाट प्रभावशाली टीम प्रदर्शन
व्यावसायिक स्केम प्रमाणपत्र प्रशिक्षण
पीएसएम आई, द्वितीय र तेस्रो स्तर प्रमाणपत्र एक कठोर मूल्याङ्कनमा न्यूनतम पास हुने स्कोर प्राप्त गर्न प्राप्त गरिन्छ, जुन अनलाइन आयोजित छ।
PSM म धारकहरूलाई राम्ररी आधारभूत कुराहरू बुझ्दछु, र स्क्रिममा विश्वव्यापी स्वीकार्य शब्दकोष र दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्न सक्षम छन्।
पीएसएम II धारकहरूसँग सिद्धान्तहरू र प्रक्रियाहरूको गहिरो बुझाइ छ जसले स्क्रम ढाँचालाई कम गर्न सक्छ र व्यवस्थित सन्दर्भमा स्क्रिम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छ।
पीएसएम तेस्रो प्रमाणीकरण धारकहरूले स्क्रिममा प्रतिष्ठित स्तरको प्रतिष्ठा देखाउँछन्।
PSPO अनलाइन परीक्षा एक कठोर परीक्षा हो र प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न न्यूनतम पास पास स्कोर चाहिन्छ।
PSPO म धेरै गाह्रो प्रयास गर्नु अघि पारित हुनु पर्छ
PSPO II। (Scrum.org) प्रशिक्षणको बारेमा भर्खरै, प्रमाणपत्र मूल्याङ्कन प्रयास गर्न विद्यार्थीहरूलाई एउटा पासवर्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि विद्यार्थीले 14 दिन भित्रको मूल्याङ्कन लिन्छ र कम्तीमा 85% स्कोर गर्दैन भने, तिनीहरू कुनै लागतमा 2nd प्रयासको हकदार छन्। नयाँ पासवर्डको साथ 2nd इमेल स्वचालित रूपमा विद्यार्थीलाई पठाइनेछ।